Isizwe samaBhaca asinayo iKumkani - Bayede News
Isizwe samaBhaca asinayo iKumkani
Isithombe: nguLindile Mbontsi
Budumele uBukhosi bukaZulu ngozibiza ngeKumkani yamaBhaca esifundazweni i-Eastern Cape yize ewazi kahle umlando ngalesi sizwe ukuthi emlandweni waso kasinayo iKumkani kepha sinaMakhosi nezinduna, kwagcina ngeKumkani eseyakhothama uNcapayi.
Lokhu kulandela ukuvela kaningana kweNkosi uMadzikane II Thandisizwe Diko wamaBhaca aseMount Frere e-Eastern Cape ezibiza ngeKumkani yamaBhaca yize umlando wabo ukucacisa ukuthi isizwe samaBhaca kasinayo iKumkani kepha sinaMakhosi nezinduna.
Lokhu kufakazwe nangokhulumela uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu esifundazweni, uMnu uMamkeli Ngam, ukuthi iNkosi uMadzikane II Thandisizwe Diko akayona iKumkani kepha uyinkosana enezigodi ezimbili kuphela eLubhacweni naseSipilini.
INkosi uThandisizwe Diko eganwe uNkk uKhusela Diko okhulumela iHhovisi likaMengameli uRamaphosa isematheni ngethenda yezigidi esiholele ekutheni unkosikazi wayo athathe ikhefu elikhethekile ngenhloso yokubhekana nalezi zinsolo.
Ulokhu evela ezindabeni ezibiza ngeKumkani yamaBhaca.
Noma kunjalo uSihlalo weNdlu yabaHoli boMdabu KwaZulu-Natal iNkosi uPhathisizwe Chiliza ukubeke kwacaca ukuthi indaba yobuKumkani yinto yase-Eastern Cape futhi akuyona “ilalavuka” akwenzeki ukuthi ulale uvuke usuyiKumkani, kunemigudu nemigomo elandelwayo kuhlangene izizwe aMakhosi nezinduna kube khona nomhlaba phakathi kwayo okuthi loyo muntu obangayo abe nomhlaba anomlando nobufakazi ngawo futhi asekwe nangezinye izizwe.
“Akuyona into yokuthi umuntu uma ejatshuliswa ukuvela kuthelevishini aqhamuke esezibiza ngeKumkani ngoba enobudlelwano nabathile,” kusho iNkosi uChiliza. Ithe umlando wamaBhaca uyaziwa ukuthi kawunayo iKumkani wona angaphansi koBukhosi bakwaZulu yingakho uma kunemicimbi efana noMkhosi weLembe neminye ebakhona esuka koMt Frere, eMatataiele, eKokstad, eMzimkhulu naseXopo kwaNokweja.
“Ulazi kahle igama elithi Bhaca ukuthi lisho ukuthini njengoba benolimi lwabo oluthile uma bethi bayakhuluma bona bathi bayabhobha,” kusho iNkosi uChiliza.
Ithe amaBhaca isizwe esidabuka KwaZulu-Natal esabhaca sibalekela izimpi zeSilo uShaka esajahwa saza sayoma entabeni yaseMount Ayliff iNtsizwa lapho kwawela khona izinsizwa ngenxa yombango womhlaba. Le ntaba yabizwa ngeNtsizwa nje kwakuhlala khona izinsizwa kuliwa izimpi, kwawa khona amaqhawe ayibamba ishisa.
“Ngisho bekhuluma bathi ‘SingamaBhaca kaMadzikane kaZulu eThekwini the Great Place’, kusho ukuthini lokho abantu bathi behlala le e-Eastern Cape kodwa bakhale ngo-Ethekwini,” kusho iNkosi uChiliza.
Uphinde wathi ulimi lwabo namagama abo okubalwa kuwo ukubhobha kwakuyindlela ababexhumana ngayo ngesikhathi sezimpi.
INkosi uChiliza ifakazelwe nayilowo okhulumela iSILO uMntwana uThulani Zulu kodwa othe ngeke bazikhathaze ngabantu abakhuluma okwabo kodwa ukuphakanyiswa kweKumkani yesizwe kwenziwa uHulumeni.
“Baningi ababangayo njengoba wazi ukuthi kusanda kwehliswa omunye uMavuso obezibiza ngeSilo yize azi kahle ukuthi iKhomishini kaNhlapo yakuchaza ukuthi iSILO kuphela esibusayo KwaZulu-Natal,” usho kanje.
Uthe amaBhaca ayabanga kodwa-ke ngeke bazihlupha ngomuntu okhuluma ukuthanda kwakhe kodwa kuyaziwa ukuthi busakhulumisa uBukhosi base-Eastern Cape emaBhaceni kusenesidididi nje soBukhosi kuphela uma sekukhulunywa ngobuKumkani sekuyinto eseceleni futhi ekude.
“Futhi ngeke sijikijelane nabo ngamazwi ngalokho ngomuntu ozikhulumela okwakhe engakaze anikezwe igunya lalokho uHulumeni ngaphansi kweSigaba 5 soMthetho wezi- 2005 (Act 5 of 2005)” kusho uMntwana uZulu.
Noma kunjalo neNdlu enkulu yamaBhaca aseMt Frere angaphansi kwayo uNkosi uDiko amhlabe amhlikiza ngesenzo sakhe sokufaka isizwe samaBhaca ehlazweni lokusolwa ngomkhonyovu wemali kaHulumeni esikhathini labo abantu bedinga izinsiza zokuzivikela nokulwa nesifo esiwubhubhane ukhuvethe.
Isitadimende abasikhiphile bakubeka ngembaba ukuthi bayacela ukuthi bonke abathintekayo ekuntshontsheni imali kaHulumeni ikakhulukazi leyo ebhekene nokhuvethe babhekane nengalo yomthetho.
Okhulumela indlunkulu yamaBhaca uMtwana uSiphiwe Bhaca Makaula uthe ubuKumkani bamaBhaca baphelela kuKumkani uNcapayi.
“Emuva kwalokho akekho omunye owagcotshwa ngokusemthethweni njengeKumkani” kusho uMtwana uMakaula.
Uphinde wathi nasemuva kokushona koyisemkhulu iKumkani uMadzikane KaZulu akekho umuntu owaqanjwa amaBhaca ngokusemthethweni ngegama lakhe njengoba iNkosi uDiko izibiza ngoMadzikane.
“Umuntu owenza lokho kumbe ozibiza ngoMadzikane ungusomathuba futhi usile ngokuzenza umkhulu wethu ikakhulukazi uma enezinhloso zokuntshontsha imali nezinsiza zikaHulumeni esebenzisa igama lakhe” kusho uMntwana uMakaula.
Uthe kabanayo into ebizwa ngeRoyal Bhaca Projects ngaphansi koMkhandlu wobuholi bamaBhaca ekukhulunywa ngayo ukuthi ithola amathenda ezizumbulu zikaHulumeni.
Kanti namaMpondo akucacisile ukuthi akazi ngobuKumkani bamaBhaca akwaziyo ukuthi iKumkani uNcapayi bashadiselana ngentombi neKumkani wamaMpondo uFaku ngoba babesakha ubuhlobo bamshiyela indawo koMt Frere ukuze andlondlobale nesizwe sakhe kodwa empeleni yena ngeke abeneKumkani ngoba obabo buKwaZulu. Bathi amaBhaca ayebakhona emicimbini nasemihlanganweni ethila yamaMpondo kusaphila iKumkani uThandizulu Sigcau.
IBamba leNdlu yabaholi bendabuko esifundazweni sase-Eastern Cape iNkosi uLanda Mavuso naye uthe kabukho ubuKumkani bamaBhaca kepha anaMakhosi nezinduna.
Ibuzwa iNkosi uDiko ngalokhu inqume ukuthi kukhulunywe nabajutshwe ukukhulumela iNdlu yamaBhaca uMnu uLumko Mtimde.
“Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngoBukhosi nobuKumkani bami ekhona amaBhaca, yiwona ekufanele akhulume ngokwawo” kusho iNkosi uDiko.
UMnu uMtimde ucele kubhekwe uFacebook wakhe lapho efake umlando ngobuKumkani bamaBhaca lapho eqhubeke ngokucacisa igama elithi Bhaca ukuthi kungenzeka lalingachazi ukubhaca lokhu okwaziwa abantu kepha kungenzeka lalisho ukugcaba okuyisiko lawo elihambisana nempilo yomuntu. Kulowo mlando kuvela ukuthi uMakaula wazalwa umfazi wesibili kaNcapayi njengoba wayenabafazi abaningi kanti uDiko noSangoni yibona ababezalwa yindlunkulu.
Lo mlando uveza ukuthi uDiko waba umholi wamaBhaca iminyaka engama-35 ethatha kuyo iKumkani uMadzikane kaZulu, nokuthi wathathwa njengeqhawe elalwa namaBhunu livikela umhlaba futhi enenkani yingakho iNkosi uThandisizwe Diko ebuvuselela ubuKumkani bamaBhaca.